Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 43
2007-07-06 @ 07:57 in Ankapobeny
Indrisy manko ry afa-nanidina toy ny lolo
Ankehitriny ianao mangina toa zary tongobolo!
Tsy hitako loatra izay hanombohana ity soratra ity! Mikasika ny tena manokana manko fa tsy mba mikasika firenena na eto an-tanàna. Tsy mivantana fa ankolaka.
Fahafinaretako ny nandefa papango hafatra. Fialamboliko ny manety papangom-baovao. Fa nangina ny rivotra mampanidina azy lavitra; ka tsy manan-ko-tazanina intsony. Raha mba azy moa ny kofehy fampanidinana leoko ihany fa samy mpiantsambo izao ihany.
Fa raha misintona papango hira izy, izahay misintona papango tapaka. Raha mahazo papango sary izy, izahay mionona amin’ny papango miandry. Indrisy, toy ny tongobolo sisa ka sokafana vao mahazo rivotra nefa fotoana kely dia kely izany ka tsy ho ampy ijerena hazavana akory.
Ceremony building at Iavoloha
2007-06-01 @ 08:39 in Ankapobeny
Tsy hoe lasa nanoratra amin’ny teny anglisy indray aho fa anarana trano iray eo ampanamboarana amin’izao fotoana izao ao ambadiky ny lapam-panjakana ao Iavoloha ihany. Tetikasa iray heverina ho vita afaka 15 andro mba hialoha ny fankalazana ny faha-47 taona niverenen’ny fahaleovantena amin’ny 26 jona 2007 ho avy izao.
Nitsidika ny asam-panamboarana manko omaly ny filoham-pirenena miaraka amin’ireo orinasa manatontosa ny famitana io asa io. Ny filoha izay nanao ilay satroka sy fitafy ankapobeny mampiseho ny revy amerikana ao anatiny ao indray. Ilay anaran’ny trano koa moa tamin’ny teny anglisy rahateo izay fiteny fampiasa voalohany any Etazonia amin’izao fotoana izao aloha. Ny orinasa manatontosa ny famitana ny asa moa dia roa no fantatro dia ny Magrama sy ny Colas (hevero fa hatramin’izao aloha dia ny Colas no mahazo asa be indrindra tamin’ity fitondrana ity…raha ny Alma kosa no any an-tsain’ny hafa).
Ny nandraisana ny orinasa Magrama ho anisan’ny mamita ny asa dia ahatsinjovana ny rafitry ny trano aorina ihany koa. Azo heverina fa trano horavahan’ny endri-bato ananan’i Madagasikara ity trano ity. Zavatra mahafinaritra izany satria matetika dia ny trano any ivelany no tena hita ho jenitra amin’ny vaton’i Gasikara. Ny orinasa Colas indray moa dia azo heverina fa ny fahamatoran’ny asa sy ny fe-potoana famitany azy no nahazoany ity tolotra iray ity. Ireo orinasa roa ireo ihany no reko na dia telo aza no nambara fa miara-mamita ny asa. Dia ankamantatra ho antsika rehetra izany hoe iza no fahatelo ?
Eo ankilan’izay dia misy fiteny mahazatra ny olona eto Antananarivo amin’ny fananganana trano avo hita eo amin’ny anarana nefa ny trano aoriana amin’izao fotoana izao dia tsy misy rihana. Dia nanontany tena tany anaty tany izay nahita ny sary hoe hay ve ka azo atao tsy misy rihana ny trano dia efa azo lazaina hoe « building » e ! Na izany aza tsy kely akory ny fanamboarana fa trano mahazaka olona arivo no kendrena ho tafiditra ao anatiny. Tsy ho fipetrahana atao vonjimaika ho amin’ny fotoana manokana intsony no mijoro eo fa fanorenana maharitra sy ho tsara endrika ihany koa.
Dia tena mihamaro tokoa anie izany fanorenana hamoriana olona maromaro eny amin’ny lapam-panjakana eny Iavoloha izany. Ao no misy ny foibe fampianarana Leadership. Efa misy efitra lasa fiangonana ihany koa. Dia avy koa ity trano vao naorina ity. Fa tsy nataon’ny filoha ankehitriny aloha ny nanangana ny foiben’ny rnm sy ny tvm tany amin’ity lapa ity araka ny fikasan’ny teo alohany e ! mba fikasana tsara avy aminy aloha iny. Azo tarafina amin’izany manko raha amin’ny fijery ivelany fa tsy mieritreritra ny hanidy ny vaovao ampitain’ny sary sy feo ho eo ambany fahefany velively ny filoha. Dia io hita eo anilan’ny rnm ankehitriny sy ampitan’ny Hilton Madagascar io ny foiben’ny tvm vaovao.
«Mialoha 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 Manaraka»